Muxuu Wayne Rooney ka yiri wararka la xiriira in Cristiano Ronaldo uu ku biirayo kooxda Man City? – Gool FM
Muxuu Wayne Rooney ka yiri wararka la xiriira in Cristiano Ronaldo uu ku biirayo kooxda Man City?
(Manchester) 27 Agoosto 2021. Halyeeyga kooxda Manchester United ee Wayne Rooney ayaa ka hadlay wararka la xiriirinaya saaxiibkiisii ​​hore Cristiano Ronaldo inuu u dhaqaaqo naadiga Manchester City.
Cristiano Ronaldo wuxuu u soo ciyaaray United intii u dhaxeysay 2003 iyo 2009, waxaana mudadii uu matalayay United uu ciyaaray 292 kulan tartamada oo dhan, isagoo u dhaliyay 118 gool halka sidoo kale uu caawiyay 69 gool.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” Rooney ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay wararka la xiriirinaya Ronlado inuu ku biirayo kooxda Man City, wuxuuna yiri:
“Ronaldo wuxuu dhaxal weyn ku leeyahay Manchester United, mana u malaynayo inuu u dhaqaaqi doono Manchester City.”
“Dabcan kubadda cagta ma taqaanid, horey waxaa jirtay in Peter Schmeichel uu u dhaqaaqay Manchester City.”
“Laakiin uma malaynayo in Cristiano Ronaldo uu sidaas samayn doono.”
Yeelkeeda, wararka ka imaanaya gudaha Ingariiska ayaa xaqiijiyay in Jorge Mendes, oo ah wakiilka Ronaldo, uu ka shaqeynayo sidii uu laacibka reer Portugal ugu biiri lahaa Manchester City, iyada oo hal sano uu ka harsan yahay qandaraaskiisa haatan ee Juventus.